द्वन्द्वकालमा भागेका सैनिकलाई जन्मकैद ! - Everest Dainik - News from Nepal
द्वन्द्वकालमा भागेका सैनिकलाई जन्मकैद !
काठमाडौं, असोज २ । द्वन्द्वको समयमा भागेको आरोपमा नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले एक सैनिकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ । त्यसविरुद्ध पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुका साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–५ सुकाटियाका सिंहबहादुर शाहीलाई १४ वर्षपछि जन्मकैदको फैसला सुनाइएको हो । समरी जनरल सैनिक अदालतले १९ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको हो ।
फैसलामा शत्रुसम्बन्धी कसुर ऐनअन्तर्गत दोषी ठहर गरिएको जनाउँदै सर्वस्वसहित जन्मकैद, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उनले हिनामिना गरेको तीन थान म्यागजिनको एक सय ८२ रुपैयाँ ९६ पैसाका दरले पाँच सय ४८ रुपैयाँ ८८ पैसा तथा ६० राउन्ड काट्रिजको २४ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले एक हजार चार सय ७० रुपैयाँ सजाय सुनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस शान्ति मिसनमा कुन–कुन देशमा छन् नेपाल प्रहरी ?
तारादल गणका कार्यरत उनलाई १८ पुस, ०६१ मा धादिङको चरौदीमा अप्रेसनमा खटिएका वेला एउटा इन्सास राइफल, तीन म्यागजिन र त्यसको ६० राउन्ड काट्रिज लगेर भागेको आरोप छ ।
त्यही आरोपमा गत ७ फागुनमा घरबाटै पक्राउ गरिएको उनका दाइ नन्दबहादुर शाहीले बताए । तर, समरी जनरल सैनिक अदालतले भने ९ वैशाखदेखि थुनामा रहेको जनाएको छ । र, त्यही दिनदेखि कैद गणना गर्न कारागारलाई पत्राचार गरेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस भण्डारीले सम्हाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी
ट्याग्स: Janyudda, Nepal Army, nepali sainik